La Grande Braderie de Madagascar : hanjaka ireo orinasa malagasy madinika | NewsMada
La Grande Braderie de Madagascar : hanjaka ireo orinasa malagasy madinika
Hanomboka anio etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny hetsika La grande braderie de Madagascar (GBM) andiany faharoa amin’ity taona ity.tafiditra ao anatin’ny fanomanana ny fetin’ny reny ny hetsika.
Homen-danja ireo orijnasa madinika sy salantsalany mamokatra ny vita malagasy, hoy ny mpikarakara avy ao amin’ny Madavision, Ramanantsoa Harilala. Fotoana hanomezana sehatra ireo mpandraharaha malagasy ny hetsika ara-barotra toy izao hanomezana vahana azy ireo hampitombo ny vola entiny miasa hampivelatra ny orinasany, hoy hatrany ny fanazavana.
Manodidina ny 300 ny tranoheva ho hita mandritra ny dimy andro etsy Mahamasina ao anatin’ity GBM ity.
Fotoana hanomezana tolotra ho amin’ny fetin’ny reny ihany koa ao an-toerana. Anisan’ny tena be mpitady ny ranomanitra rehefa fety toy izao. Eo koa ny kojakojan-dakozia, ny lamaody toy ny akanjo, ny kiraro, ny poketra, ny firavaka…
Manana tranoheva ao ihany koa ireo mpivarotra haingon-trano izay be mpitady rehefa fetin’ny reny. Akoatra izay ny lamba firakotra amin’izao fotoan’ny hatsiaka izao izay hifanotofana hatrany.